Intlalontle kunye ne-ikholoji gite Igadi engaphakathi - I-Airbnb
Intlalontle kunye ne-ikholoji gite Igadi engaphakathi
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguYann
Kumbindi welali encinci yaseSaint-Congard, eMzantsi Brittany, kufutshane neCanal de Nantes eBrest, igadi yangaphakathi iyakwamkela ukuba uyeke okanye uhlale kamnandi. Uninzi lokuhamba emahlathini luyafumaneka ukusuka kwindlu esemaphandleni.
Le ndlu yabuyiselwa ngo-2019, ibe ixhalabele impilo-ntle : izinto zendalo, izinto zokondlula ibhedi nezinto zebhedi.
Indlu esemaphandleni inegumbi eliphantsi elinendawo yokubasa umlilo, igumbi lokuhlala eliyi-kitchen, namagumbi okulala amabini phezulu (iibhedi ezimbini ezilala abantu ababini ziyakwazi ukuzidibanisa). Xa usuka kwindlu esemaphandleni, ungangena kwigadi yangaphakathi, ngoku ehlala kuvimba omdala oyi-60 miliyoni, kwaye yona ngokwayo iya kwintente encinci.
4.90 · Izimvo eziyi-112
Ukuphosa amatye ukusuka kwindlu esemaphandleni, iNantes ukuya kumjelo weBrest. Apho ungathatha umzila otshixwayo ngezitshixo. Into ekufuneka ibonwe e-Saint-Congard: i-baker-patisserie. ULudo noMarie banikezela ngezonka ezikhethekileyo nezimuncumuncu oza kuzikhumbula, ndingasathethi ke ngee-pizzas zabo zasebusuku ezenziwe ngeCawa, ezimnandi nezifanelekileyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Yann
J'aime la Bretagne intérieure et ses vieilles maisons, que je prends plaisir à rénover !
Ndiza kwamkela wena ndize ndikwazise ukuba ufuna izinto onokuzenza kunye nezinto onokuzenza ezikufutshane.
Izinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo zifunyanwa ngokubhukisha : isidlo sakusasa, iipayi ezinencasa ezinezimuncumuncu zasebusuku, iibhaskithi zepikiniki.
Iibhayisikile ziyafumaneka simahla kule ndlu isemaphandleni.
Ndiyingcali yokuphulula izihlunu kunye negqirha ye-shiatsu. Oku kuza kukuvumela ukuba wonwabele ukuhlala kwisayithi, ukuba unqwenela kwaye ngokubhukisha, ixesha lokuphila kakuhle nelokuphumla.
Izinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo zifunyanwa ngokubhukisha : isid…